IATA isungula iNkqubo yoQeqesho loQinisekiso lweNdalo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IATA isungula iNkqubo yoQeqesho loQinisekiso lweNdalo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Ngelixa uzinzo ludlale indima ebalulekileyo kolu shishino iminyaka emininzi, yinto ephambili ephambili njengoko icandelo lakha kwakhona kwiziphumo zobhubhane we-COVID-19.
IATA ibisenza uqeqesho kumzi-mveliso wezobuchwephesha ukusukela nge1972.
Ikharityhulam ye-IATA igubungela ngaphezulu kweekhosi ezingama-350 ezithathwa ngabathathi-nxaxheba abangaphezu kwe-100,000 ngonyaka.
Iimodyuli ezahlukeneyo ziyilelwe ukubonisa ukuba zombini izenzo zomntu ngamnye kunye nemigaqo-nkqubo yenkampani iyonke inegalelo kuzinzo.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) isungule inkqubo yoqeqesho lokuzinza kokusingqongileyo kunye ne IYunivesithi yaseGeneva (UNIGE). Ngelixa uzinzo ludlale indima ebalulekileyo kolu shishino iminyaka emininzi, yinto ephambili ephambili njengoko icandelo lakha kwakhona kwiziphumo zobhubhane we-COVID-19. Kuphononongo lwakutsha nje olungaphezulu kweengcali zoqeqesho kumashishini angama-800, uzinzo lwachongwa njengeyona mfuno iphambili yoqeqesho, ukuze kuqinisekiswe ukuba abasebenzi banokufumana izakhono ezisisiseko zobugcisa nezokusebenza, kodwa nezakhono ezifunekayo.
Isatifikethi se-IATA-UNIGE seZifundo eziPhambili (i-CAS) kuZinzo lokusiNgqongileyo kuhambo lwezoPhapho sineemodyuli ezintandathu ezibandakanya ezi zihloko zilandelayo:
Yila iqhinga lokuzinza
Iinkqubo zoLawulo lokusiNgqongileyo kwiAviation
Amafutha oQeqeshiso oQinisekiso
Uxanduva lokudibana kweNtlalontle kunye neeNqobo eziseSikweni zoMbutho
Iimakethi zeCarbon kunye nokuHamba
Iimodyuli ezahlukeneyo ziyilelwe ukubonisa ukuba zombini izenzo zomntu ngamnye kunye nemigaqo-nkqubo yenkampani iyonke inegalelo kuzinzo. Abathathi-nxaxheba baya kufunda ekuchongeni iseti yamanyathelo anokuphunyezwa ukuphucula uzinzo kwixesha elifutshane, eliphakathi nelide. Le nkqubo ikwadibanisa izifundo ezithile zokusingqongileyo noxanduva lwentlalo, imigaqo yokuziphatha yombutho kunye nobunkokeli obunoxanduva, ngenjongo yokuvumela abathathi-nxaxheba ukuba bafumane iimpendulo malunga nokuba yintoni 'ekhokela ngokuthembekileyo' kwindawo yabo yomsebenzi kunye nendlela yokuzibandakanya ekuthathweni kwezigqibo ezifanelekileyo kunye thintela ukungaboni kakuhle.
Abasebenzi beenqwelomoya ngenqwelomoya banezakhono eziphezulu njengoko kufuneka besebenze kwaye bathobele imigangatho emininzi yezorhwebo kunye nehlabathi. Kwiminyaka edlulileyo besilungisa uqeqesho lwethu ukuze sikwazi ukuhlangabezana neemfuno eziguqukayo zeshishini. Kungoko kungasothusi ukuba ngoku songeza uqeqesho lokuzinza kokusingqongileyo kwikharityhulamu yethu. Ukuqinisekisa ukuba bonke abo basebenza kolu shishino banikwa ithuba lokufumana ezi zakhono zintsha kubalulekile, njengoko siqhubeka sigxininisa ngakumbi ekwenzeni imisebenzi yethu igcineke ngakumbi, ngelixa sisakha kwakhona kwiziphumo zobhubhane we-COVID-19, utshilo uWillie Walsh, UMlawuli-Jikelele we-IATA.
I-IATA ikhethe iqabane layo ekudala lisebenza i-UNIGE ukwenza ikhosi njengoko oku kuvumela ukudityaniswa okukodwa kobungcali kwezemfundo yeUNIGE kunye nolwazi lweshishini lweIATA. Icandelo lezentlalo lenkqubo liza kufundisa kwaye lilungiselele iinkokeli ezizayo uxanduva oluya kuba negalelo kwimpilo yecandelo lokuhamba ngenqwelomoya kunye noluntu ngokubanzi.
Olu qeqesho lwenziwa njengeemodyuli ezizodwa kunye / okanye iphakheji epheleleyo yazo zonke ezintandathu. Iikhosi zisiwa kumagumbi okufundela aphilayo, ukubonelela ngemfundo yokufundisa ekhokelwa ngexesha lokwenyani apho abathathi-nxaxheba banokunxibelelana, babone, kwaye baxoxe ngenkcazo-ntetho. Ngexesha leeseshoni abathathi-nxaxheba baya kubandakanyeka nezixhobo zokufunda ngelixa besebenza ngokwamaqela, konke kuseto lwe-Intanethi.
IATA ibisoloko inikezela ngoqeqesho kushishino lokuhamba ngenqwelomoya ukusukela nge1972. Ikharityhulamu yayo igubungela ngaphezulu kweekhosi ezingama-350 ezithathwa ngabathathi-nxaxheba abangaphezu kwe-100,000 ngonyaka. Ezi zifundo zifundiswa ngeendlela ezahlukeneyo ezinjengegumbi lokufundela (ubuso ngobuso kunye ne-virtual), kwi-Intanethi, njl njl, ngokudibeneyo namaqabane oqeqesho angaphezu kwama-470.